Ifektri Yeshaja yefoni ye-Xiaomi eyenziwe ngokwezifiso, Abakhiqizi nabahlinzeki - Dongguan Changsen Electronic Technology Co., Ltd.
Ikhaya > Imikhiqizo > Ishaja Power Circuit Board > Ishaja yefoni yeXiaomi
Izici kanye nokusetshenziswa kwemikhiqizo yokuphakelwa kwamandla kweshaja1) Injiniyela isebenzisa ukwakheka okuzinzile kochungechunge lokuphakelwa kwamandla, futhi ipharamitha yokukhipha kwamandla wesifunda izinzile ngokuqhubekayo ukuvimbela ukwehla kwamandla kagesi kungadala umonakalo empilweni yomkhiqizo. 2) Uma ucabanga ngokuqina kwayo, ibhodi lesifunda lizothenga izinto ezihlinzeka ngemikhiqizo efanelekayo, lenze ukuguga nokuhlola amahora angama-720 ngaphandle kokuphazamiseka, futhi liqinisekise kaningi ukuqina kwalo. Ibhodi lesifunda lizofakelwa ibhokisi lama-fuse othomathikhi, i-high-voltage noma i-short-circuit protection othomathikhi, futhi libuyisele ngokuzenzakalela ibhodi lesifunda ngemuva kokuphepha. 3) Ishaja isetshenziselwa imikhiqizo ye-elekthronikhi neyedijithali njengamaselula.
1.Xiaomi Ucingo Ishaja
Ishaja boardcircuit board
Faka u-100 ~ 240 v 50/60 hz
2.Izici nokusetshenziswa kwemikhiqizo yokuphakelwa kwamandla kweshaja
1) Unjiniyela usebenzisa ukwakheka okuzinzile kochungechunge lokuphakelwa kwamandla, kanye okukhipha i-voltage parameter yesifunda kuzinzile ngokuqhubekayo ukuvimbela i- ukushintshashintsha kwamandla okubangela ukulimala empilweni yomkhiqizo.
2) Ngokubheka ukuqina kwayo, ibhodi lesifunda lizothenga izinto ezihlinzeka ngemikhiqizo efanelekayo, lenze ukuguga nokuhlola amahora angama-720 ngaphandle kokuphazamiseka, liphinde liqinisekise ukuqina kwalo. Ibhodi lesifunda lizofakelwa ibhokisi le-fuse lokuzenzakalelayo, ukuvikela okuzenzakalelayo okukhulu noma okufishane okuzenzakalelayo, futhi libuyisele ngokuzenzakalela ibhodi lesifunda ngemuva kokuphepha.
3) Ishaja isetshenziswa kwimikhiqizo ye-elekthronikhi neyedijithali efana neselula amafoni.
Kuhle imikhiqizo, insizakalo engcono
Isiqinisekiso seminyaka emibili nesinxephezelo emihlanu ngenkinga yethu
Ukuqokwa nokukhethwa (China, USA / Japan, Europe, njll.)
Okokufaka amandla kagesi
IC uhlelo lokusebenza luqinisekisa amandla nokuvikelwa okwanele
Ngaphezulu okwamanje, ukulayisha ngokweqile, ukuvota ngokweqile nokuvikelwa kwesifunda okufushane
Gcwalisa ngokugcwele ukuguga
Oneorder, nokusekelwa kokuhlola
Ukulethwa kungakapheli izinsuku ezingama-25
4. Ukuhlolwa kwekhwalithi
1) Ishaja isidlulise izitifiketi ze-3C ne-CQC zezikhungo zikazwelonke zobungcweti
2) Sizoklama imishini ekhethekile yokuhlola umkhiqizo wethu ngamunye. Njalo umkhiqizo ukuhlolwa kokuhlangenwe nakho. Hhayi ukuhlolwa okungahleliwe. Lokhu kungenye yomkhiqizo imishini yokuhlola.
Ibhodi lesifunda ligcwele ibhokisi elenziwe ngokwezifiso, ukulwa nokushayisana kanye ukushaqeka, kanye nesikhwama se-PE esikhwameni sokuqinisekisa umswakama.
6. Ulwazi Lokunamathiselwe
1) Amashaja ajwayelekile angaba sesitokisini futhi alethwe ngosuku olufanayo.
2) Ishaja izotholakala ngamasampuli kungakapheli izinsuku eziyi-7.
3) Amanani athathelwa ngokwezinga elilingana nebhodi lesifunda eliphrintiwe.
4) Imiyalo yangokwezifiso:
Inqobo nje uma usitshela izidingo zakho zokusebenza, onjiniyela bethu bazokunikeza izixazululo zokwakha, zokuthuthuka nezokukhiqiza. Singakwazi ukuklama kunoma yisiphi isimo nosayizi. Senze amashumi ezinkulungwane ngokwezifiso, futhi siyazi ukuklama nokukhiqiza izinto ze-elekthronikhi ezidinga ubuchwepheshe nobungaguquguquki. Ukukhiqizwa kwethu kuyizintambo zokukhiqiza ezizenzakalelayo ngokuphelele, kungakunika ikhwalithi ezinzile nokusebenza okungaguquguquki kwemikhiqizo. Ukusungula ubudlelwano bokubambisana besikhathi eside, obulungele ukugcina ukuzinza kwekhwalithi yomkhiqizo kanye nezinsizakalo zobuchwepheshe ezilandelwayo. Inkampani yethu isebenza kakhulu ngokwezifiso, kepha azikho ezenziwe ngomumo. Izithombe ezilapha ku-inthanethi zonke ziyisampula esi-ode ukuthi kwenziwe amakhasimende.
7.Order kanye nenkokhelo ukulethwa indlela
1) Indlela yokukhokha: 30% yokukhokha kusengaphambili, ibhalansi ekhokhelwe ngemuva kokuthunyelwa.
2) Umkhumbi ngokushesha uma inani lendawo lihlangabezana nezidingo.
3) Uma ungazi umkhiqizo, sicela uye egumbini lethu lokubuka ukuze ubone isampula, uqinisekise futhi u-ode, ikhwalithi ilungile uku-oda, ukulethwa uma kukhona umehluko phakathi komkhiqizo nesampula kungasekela ukubuya nokushintshana, ikhwalithi isuselwa kusampula!
8. Isingeniso sezinsizakalo zebhodi lesifunda:
Umhlangano wangaphambi kokudayiswa uzoxhumana ngenkuthalo namakhasimende ngemininingwane eningiliziwe, izidingo zamakhasimende, imingcele yemikhiqizo, amazinga wekhwalithi, ukuhlinzeka ngokubonisana, ukwamukela ama-oda ocingo nama-oda eposi, nokuhlinzeka ngezinsizakalo ezahlukahlukene ezilula nezimali.
Nikeza amakhasimende isisombululo esihle kakhulu senani lentengo yokusebenza ku- ukuthengisa, ukulandelela ngenkuthalo ukusayina inkontileka, ukulethwa kwempahla nokusiza amakhasimende ukuxazulula ubunzima.
Ngemuva kokuthengiswa: 1. Uma kuyinkinga yekhwalithi yomkhiqizo uqobo, kuholela ekunganeliseki. Sizosiza ikhasimende ukuxazulula inkinga ngokushesha okukhulu ngesikhathi okuvunyelwene ngaso. 2. Uma umkhiqizo ungeke usetshenziswe ngokujwayelekile ngenxa yezici zabantu. Sichazela ikhasimende imbangela yenkinga, okukhombisa ukuthi inkinga enjalo ayihlanganisiwe iwaranti yethu, bese sinikeza ezinye izixazululo kukhasimende ngokwenkinga yekhasimende.
Amathegi ashisayo: Ishaja yefoni ye-Xiaomi, eyenziwe ngokwezifiso, iFektri, Abenzi nabahlinzeki
Ishaja yefoni ye-Android
Ishaja yefoni ye-Huawei